Madaxda Ururada Mucaaradka oo wali u xiran kaligii taliye Meles Zenawi.
Madaxda urarka macuuradka (CUD) ayaa isniintii maxkamad la keenay markii ugu horeysay ilaa iyo banaanbaxyadii ka dhacay Addis Ababa oo geystay dhimasho iyo dhaawac aad u badan. Maxkamada xukuumadda uu Ra’iisal Wasaaraha ka yahay Meles Zenawi ayaa goosatay in lasii hayo 20 kamid ah madaxda mucaaradka oo maxakamada la keenay iyodoo 14 toban cisho oo kale la sii hayndoono dibna loo dhigey maxkamada, sida laga soo xigtay mid kamid ah qareennada madaxda mucaaradka oo la yiraah Mehrteab Leul.
Dadka xiran ayaa waxaa kamid ah Haile Shewal oo ah ninka madaxda ka ah xisbiga mucaaradka ee layiraah CUD. Waxaa kaloo kamid ah ku xigeenkiisa Berhani Nega iyo Ninka Caanka ah ee u dooda xaquuqda aadanaha Mesfin Wolde Mariam.
Qareenka u doodaya madaxda mucaaradka Mehrteab Leul ayaa yiri waa na loo diiday in la damiinto walina wax dambi ah oo lagu soo ogay ma hayno.
Ciidamada amniga ee xukuumadda uu Ra’iisal Wasaaraha ka yahay Meles Zenawi ayaa waxay ka sii daayeen telefishinka dowladda 32 qof oo la raadinayo oo isugu jira rag iyo dumarba. Dadka ayaa waxay yihiin madaxda mucaaradka iyo dadka ka tirsan qaybaha bulshada. Waxayna telefishinka laga soo daayay sawiradoodii waxayna ciidamada amniga ee Males Zenawi codsadeen in dadkaas loo soo gacangaliyo. Dadkaan la raadinayo ayaa waxaa ka mid ah Kifle Mulat oo ah ninka madaxda ka ah Urarka Xorta ah ee Suxufiyeenta ee Itoobiya. Waxaa kaloo ka mid ah Netsanet Demissie oo ah nin ku caam baxay u doodista xaquuda bulshada.
Odayga dhalay ku xigaanka ururka macaaradka Berhani Nega oo la yiraah Nega Bonga oo 84 yir ah ayaa yiri mar ay wiilkiisa ciidamada booliska ay keeneen gurigiisa oo la baarayey wuxuu ku arkay jirdil loo geystay wiilkiisa oo ah dhinaca isha midig oo uu dhaawac kaga yaaley
Zeleke Wolde Mariam oo ah gabadha la dhalatay nin ku caam baxay u doodida xaquuqda aadanaha Mesfin Wolde Mariam oo 75 yir ayaa loo diiday inay aragto mar ay xabsiga tagtay si ay ugu geyso daawo uu malin walba qaato.
Maraykanka iyo wadamada reer galbeedka ayaa yiri kacdoonkii dhacay ee dadka lagu laayay laguna xirxiray ururada madaxda mucaaradka waxay wax u dhintay sumcadii ay dowladda Itoobiya ku lahayd adduunka.
Ururka Midowga Jaaliyadaha Soomaaliyeed ee Minnesota.